Top 4 Ụzọ iji weghachite kọntaktị site na iCloud
Olee otú iji weghachite kọntaktị site na iCloud - 4 Ụzọ E Nwere
Ọ bụrụ na ị na-ehichapụ kọntaktị site na gị iPhone mmadụ na mberede, mgbe ahụ i kwesịrị naghachi ha si gị iPhone ozugbo, ma ọ bụ ị ga-atụfu ha ruo mgbe ebighị ebi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị kwadoo kọntaktị gị ka iCloud tupu, mgbe ahụ, i nwere ike ịgbalị esonụ ngwọta naghachi kọntaktị site na iCloud ndabere faịlụ. Ego nkọwa n'okpuru ịmụta otú weghachite kọntaktị site na iCloud.
Ngwọta 1. Preview na selectively naghachi kọntaktị site na iCloud ndabere faịlụ (kacha ụzọ) Ngwọta 2. mmekọrịta kọntaktị niile si iCloud gị iOS ngwaọrụ (ihe iOS ngwaọrụ a chọrọ) Ngwọta 3. Weghachi gị iOS ngwaọrụ na iCloud ndabere faịlụ (ihe iOS ngwaọrụ a chọrọ) Ngwọta 4. Export iCloud kọntaktị dị ka a vCard faịlụ gị na kọmputa (aka mgbe na-akpụ akpụ Android ekwentị)
Ngwọta 1. Preview na selectively naghachi kọntaktị site na iCloud ndabere faịlụ
Ọ bụrụ na ị na-ehichapụ ụfọdụ dị mkpa kọntaktsị na gị iPhone, kama nke iweghachi site na otu agadi iCloud ndabere, i kwesịrị nnọọ weghachite dị mkpa kọntaktị site ochie iCloud ndabere. Ọ bụrụ na ị na-esi ọnwụ na-eweghachiri gị iPhone, mgbe ahụ, i nwere ike atụfu ụfọdụ data nke na-ẹdude na gị iPhone ugbu a. Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery) ga iṅomi gị iCloud ndabere faịlụ na-ekwe ka ị hụchalụ mkpa kọntaktị. Na mgbe ahụ ị dị nnọọ mkpa ịhọrọ mkpa na ndị weghachite ha si iCloud ndabere faịlụ
Mgbe ị na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị, kwaga a mgbake mode n'elu: Naghachi si iCloud ndabere File. Na mgbe ahụ i kwesịrị abanye na na gị iCloud akaụntụ.
Nzọụkwụ 2 Download na ike iṅomi gị iCloud ndabere maka data na ya na gam akporo ngwaọrụ
Ozugbo ị ite ke, usoro ihe omume ga-chọpụta iCloud ndabere faịlụ na akaụntụ gị-akpaghị aka. Mgbe ahụ, a ga-enwe ndepụta nke iCloud ndabere faịlụ egosipụta. Họrọ onye ị chọrọ inwe kọntaktị site na pịa bọtịnụ n'okpuru menu nke State ibudata ya. Na mmapụta window, ị nwere ike họrọ naanị ibudata kọntaktị. Nke a uche na-azọpụta gị oge ibudata iCloud ndabere faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Preview na-agbake kọntaktị site na iCloud
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu data amịpụtara si iCloud ndabere na zuru ezu. Họrọ Ndi ana-akpo na i nwere ike elele ihe ọ bụla na zuru ezu. Tinye akà rà na onye ị chọrọ iji naghachi, na pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa. Ọ gwụla. Na ị nwetara kọntaktị gị si iCloud.
Ngwọta 2. mmekọrịta kọntaktị niile si iCloud gị iOS ngwaọrụ (ihe iOS ngwaọrụ a chọrọ)
Ọ bụrụ na ị na-achọ a free otú ahụ, unu nwere ike na-jikota kọntaktị niile na gị iCloud ndabere ngwaọrụ gị. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike na-kọntaktị na ngwaọrụ gị na-azụ kọntaktị niile na iCloud ndabere. Ka ego otú ọ na-arụ ọrụ ọnụ.
1. Gaa Ntọala> iCloud na gị iOS ngwaọrụ.
2. Gbanyụọ ana-akpo.
3. Họrọ Nọgidenụ na-My iPhone na popup ozi.
4. Tụgharịa na Ndi ana-akpo.
5. Họrọ "jikota" ka jikota ẹdude kọntaktị ndị echekwara na gị iCloud akaụntụ.
6. Mgbe mgbe, ị ga-ahụ ọhụrụ kọntaktị site na iCloud na ngwaọrụ gị.
Ngwọta 3. Weghachi gị iOS ngwaọrụ na iCloud ndabere faịlụ (ihe iOS ngwaọrụ a chọrọ)
Iji weghachite kọntaktị site na iCloud, otú a na-adịghị atụ aro ya. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji weghachi ihe karịrị kọntaktị, ma ọ bụ weghachi ka a ngwaọrụ ọhụrụ, ọ bụ a mma nhọrọ. Ọ pụrụ inyere iji weghachi dum iCloud ndabere ngwaọrụ gị dị ka ozi kọntaktsị, ndetu, foto, na ọzọ. Ka anyị hụ otú o si arụ ọrụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1 ihichapu niile ọdịnaya na Ntọala
Nke mbụ niile, i kwesịrị ihichapu niile ọdịnaya na na ntọala gị na ngwaọrụ: mgbata Ntọala> Genaral> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala.
Nzọụkwụ 2 weghachite kọntaktị site na iCloud ndabere faịlụ
Mgbe ahụ ngwaọrụ gị ga-restarted na-ajụ gị ka ya elu. Họrọ Weghachi si iCloud ndabere> Sign na akaụntụ gị> Họrọ a ndabere ka weghachi.
Ngwọta 4. Export iCloud kọntaktị dị ka a vCard faịlụ gị na kọmputa
Ọ bụrụ na ị na-aga na okporo mmiri gị iPhone maka ihe Android ekwentị ma ọ bụ ndị ọzọ ụdị igwe, i nwere ike iji mbupụ kọntaktị site na iCloud ndabere gị na kọmputa. Apple-enye gị ohere mbupụ kọntaktị site na iCloud ndabere dị ka a vCard faịlụ. Lee otú ime ya:
Nzọụkwụ 1 Abanye iCloud
Launch nchọgharị weebụ na-emeghe www.icloud.com. Na ahụ abanye na na gị iCloud akaụntụ. Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ Ndi ana-akpo.
Nzọụkwụ 2 Export kọntaktị dị ka vCard faịlụ
Pịa "Ndi ana-akpo" na-emeghe adreesị akwụkwọ. Wee pịa clog icon na ala ekpe. Na ndọpụta ndepụta, họrọ "Export vCard ..." Mgbe ewepụta kọntaktị site na iCloud gị na kọmputa, mgbe ahụ, i nwere ike ịgbalị Wondershare MobileGo for Android mbubata vCard faịlụ gị Android ekwentị.
> Resource> iCloud> iCloud Kpọtụrụ Iweghachite: Olee naghachi Ndi ana-akpo si iCloud